Oromoonni Biya Alaa Jiraatan Hiriira Nagaa (Global Solidarity Rally) Taasisan – YEROOBLOG
Oromoonni Biya Alaa Jiraatan Hiriira Nagaa (Global Solidarity Rally) Taasisan
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 March 11, 2016 1 Minute
Oromoonni biyya alaa jiraatan guyyaa hara’aa jechuun Bitootessa 11, 2016 hiriira nagaa magaaloota Awuroopaa fi Ameerikaa hedduu keessatti taasisaniiru. Kaayyoon hiriira nagaa kanaa gochaa mootumman abbaa irree Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin (TPLF) durfamu uummata Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffachuufi uummatni addunya Oromoota mirga isaanii gaafachuuf mormii karaa nagaan adeemsiisaa jiran irratti ajjechaa fi dararaa motummaan wayyaanee raawwachaa jiru akka beekan gochuudha. Akkasumas Oromoota Oromiyaa keessatti fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiran bukkee dhaabbachuuf hiriira nagaa qindaa’edha.
Haaluma kanaan hiriirri nagaa kun magaalota gurguddo biyyoota Awurooppaa kan akka Osloo (Noorweey), Barliin (Jarmanii), Londoon (UK), Paariis (Faransaay), Roomaa (Xaaliyaanii), Barni (Siiwiizarlaand) fi Istookoolmi (Siwuudiin) keessatti haala cimaa ta’een deemsifameera. Akkasumas magaaloota Ameeriikaa (USA) keessattis kan adeemsifame yoo ta’u, kan magaala gudditti Ameerikaa, Waashingitan, keessatti adeemsifame isa guddaa ture jedhameera.
Hirmaatonni hiriira mormichaa dhaaddannoo ” Mootummaan wayyaanee Oromoota ajjeesuu dhiisuu qaba!, warri hidhaman haa hiikaman!, loltoonni mootummaa Federaalaa Oromiyaa gadlakkisanii haa bahan!, qotee bulaan Oromoo lafasaarraa buqqa’uu hinqabu!, Oromoon abba biyyaa ta’u qaba! kan jedhan qabatanii bahaniiru.
Hiriira nagaa boodas qindeessitoonni hiriiricha xalaayaa haala Oromiyaa fi uummanni Oromoo keessa jiran ibsuu fi mootummoonni Itoophiyaaf deeggarsa godhan dhiibbaa akka mootummaa wayyaanee irratti godhan gaafatu bakka buutota mootummaa biyyoota keessatti hiriira bahaniif kennataniiru. Oromoonni biyya alaa jiraatan (Oromo Diaspora) yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan walduuka bahuudhaan ajjechaa fi daraaraa ummata Oromoorra mootummaa wayyaaneetiin gahaa jiru haala cimaadhaan balaaleffataniiru. Hiriirri nagaa akkasii kun haala itti fufinsa qabuun kan taasifamu akka ta’e beekuun dandaa’ameera.
Suraa: Hiriira Nagaa magaala Waashingitan (Bitaa) fi Paariis (Mirga) Oromoonni taasisan
Previous Post Obbo Juneddi Saaddoo, pirazadaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Duraanii Uummata Oromoo Dhiifatama Gaafatan
Next Post Zerihuun Wadaajoo fi Wellistoonni Oromoo Sadii Gara Ameerikaa Deeman